नेताहरू योभन्दा अघि बढ्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ : योगेशकुमार भट्टराई [अन्तर्वार्ता] हाम्रो उद्देश्य पार्टीमा बिग्रह नआओस् भन्ने हो। एकता कायम रहोस् भन्ने हो। आउने चुनावमा नेकपालाई भोट माग्ने साहस बनाएर जाउँ भन्ने हो। यो उद्देश्य पुरा गर्न अन्तरक्रियामा छौं। यसका लागि कुनै गुटमा जानुपर्छ वा कुनै गुट त्याग्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। सधैं एउटै गुटमा उभिरहनुपर्छ भन्ने पनि आवश्यता छैन। शनिबार, असार २०, २०७७
महाकाली सन्धिले नेपाली भूमि मिच्न सजिलो बनायो भन्नु गलत हो : प्रकाशशरण महत [अन्तर्वार्ता] नक्सा जारी गर्दैमा हामीले विजयी प्राप्त गरेजस्तै गरि हाम्रो उद्देश्य प्राप्त भइसक्यो जसरी प्रस्तुत हुनु हाम्रो परिपक्वता हुँदैन। अब... सोमबार, असार १, २०७७
नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा उनीहरुको हातमा हुने हो कि भन्ने आशंका छ : विश्वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता] नागरिकका आशंका हुन्छन्। ती आशंका गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा उनीहरुको हातमा हुने अवस्था बनाउने त होइन भन्ने नागरि... सोमबार, जेठ १२, २०७७
हाम्रो भूमिबाट भारत स-सम्मान फिर्ता हुने प्रमाण राख्नुपर्छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता] भाजपाले त आफ्नो दर्शनमा नेपाललाई देवभूमि भनेको छ। त्यहीँबाट पनि प्रश्न उठ्छ, देवभूमि भन्ने तर दुःख दिने त गर्नुहुँदैन नि? शनिबार, जेठ १०, २०७७
भारतले नेपालका तथ्य र प्रमाण सुन्न तयार हुनुपर्छ : राजन भट्टराई [अन्तर्वार्ता] अहिले यो दुईपक्षीय विषय हो। दुईपक्षीय वार्ताबाटै सल्टाउनुपर्छ। अहिले पनि नेपाल र भारतका बीचमा सहमति छ। पहिलो यो विवादित विषय हो भन्न... शुक्रबार, जेठ ९, २०७७
आफ्नो छवि जोगाउनकै लागि पनि मोदीले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ : पद्मा अर्याल [अन्तर्वार्ता] जनतासँगको प्रतिवद्धता, पार्टीका घोषणापत्र, नीति सिद्धान्तको आधारमा मागनिर्देशित हुँदै यो कदमलाई अघि बढाइएको हो। हाम्रो भूमि छुटाएको... शुक्रबार, जेठ ९, २०७७
अहिले नै समाजवाद खोजेर कहाँ पाइन्छ? : वेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता] त्यो नबुझेर हो। यो धार्मिक पुस्तक जस्तो थियो भने २०४९ सालमा जे थियो त्यही मात्र हुन्थ्यो होला नि। ०५१ सालमा सरकारले गरेका काम जनतामा... आइतबार, जेठ ४, २०७७
प्रदेश १ सरकारले प्रहरीलाई दियो १ सय ८० थान मोटरसाइकल आइतबार, असार २१, २०७७